Dzakakosha dzimba dzehumambo muIndia | Absolut Kufamba
Dzakakosha dzimba dzehumambo muIndia
maruuzen | | Updated on 11/03/2021 11:16 | India
India inyika hombe ine tsika dzakasiyana uye dzinoyevedza. Ine vagari vanopfuura mamirioni gumi nemazana mana uye ndicho chivako chetsika muchikamu chino chenyika, kunyanya kana tichitaura nezvechiBuddha, chiHindu nezvimwe zvitendero.
Izvo zvivakwa zvemunyika zvinoratidza nhoroondo yayo, saka nhasi tichave tichiziva dzimba dzoushe dzakanakisisa muIndia. Chokwadi, kana usati waenda parwendo zvakadaro, unozopedzisira uine chishuwo chakakura kurongedza sutukesi kana bhegi rako, kubaiwa jekiseni uye kutora ndege.
2 Dzimba dzeindia
4 Imaid Bhawan Muzinda
5 Udaipur Guta reMuzinda
8 Jaipur Guta reMuzinda
10 Lake Palace kana Jag Niwas
India iri kumaodzanyemba kwekondinendi yeAsia uye inoganhurana nenyika dzazvino dzePakistan, Nepal, China, Burma, Bangladesh neBhutan. Mumaoko emachinda akasiyana zvakabatanidzwa zvishoma nezvishoma kuBritain Humambo, kuti iwane kuzvitonga kuzere pakati pezana ramakore rechiXNUMX.
Iwe zvechokwadi unoziva Gandhi uye kufamba kwayo kwerusununguko kubva kune isiri mhirizhonga. Mhedzisiro yacho yaive kuzvitonga kweIndia, nyika nhasi inoumbwa nematunhu makumi maviri nemasere nematunhu masere, iyo inoshanda sedare reparamende uye ine hupfumi hunobudirira uye hwakakosha.
Nekudaro, India ine zvimwe zvinhu sezvo yanga isingakwanise kubuda muiyo kushaya zvokudya zvinovaka muviri, kusaverenga nokunyora. Zvinonzwisisika, nekuti panguva imwechete iyo hupfumi hwayo husingaregi kukura uye iine zvombo zvenyukireya ... inyika ine vanhu vane hurombo hwakanyanya uye rakadzika mugariro.
El tsika yemagariro india inonakidza uye yakapfuura kubwinya kwayo kunoratidzwa nenhamba inoshamisa yemadzimba edzimba nedzimba dzakagadzirwa nemadzimambo, machinda uye maharaja avo vakambotonga semadzishe akakwana enyika idzi.
Muzinda uyu wakagadzirwa mukati 1912 nemugadziri weBritish. Vakanga vari makore gumi nemashanu ekugara achishanda uye mhedzisiro chivakwa icho sanganisa masitaera: Muslim, Gothic, Rajput uye Hindu. Varidzi vayo vaive nhengo dzemhuri yeWodeyars, mhuri yehumambo yeMsore.
Nhasi muzinda uri mumamiriro akanaka: a nhurikidzwa nhatu dzedombo ramambo nemavazhe mazhinji, mapindu uye matende, pamusoro peye gallery yemifananidzo yeumambo. Iyo imba yemuzinda inosanganisirawo gumi nembiri matembere echiHindu.
Kushanya kunotenderwa asi haugone kutora mifananidzo mukati. Inovhura mazuva ese kubva 10 am kusvika 5:30 pm. Svondo yega yega uye mazororo muzinda wacho unovhenekerwa nemalita zviuru zanaKubva 7 kusvika 7:45 pm.
Imaid Bhawan Muzinda
Muzinda uyu uri muguta rinozivikanwa reJodhpur, paChittar Hill. Sezvo imba yapfuura iri Chivako chezana ramakore rechiXNUMX, kubvira payakapera muna 1943. Iri nanhasi chimwe cheiyo Nzvimbo dzekugara dzakakura kwazvo pasi rese, dziine makamuri makumi matatu nematanhatu.
Nhasi Imaid Bhawan Palace iri mumaoko aMahraja Gaj Singh uye ane miziyamu iine muunganidzwa wakapfuma wemawachi, mifananidzo, mota dzekare uye mbada dzakaomeswa. Imba yemuzinda ine yekunze yakasarudzika yekunze uye yemukati inosanganisa iyo Art Deco maitiro eWest neyakare rumutsiriro neumwe muIndia.
Muzinda zvakare inosanganisira hotera ine makamuri makumi matanhatu nematanhatu chete, inotungamirirwa neketani yeTaj Hotel.
Udaipur Guta reMuzinda
Muzinda uyu ndewekare nekuti yakabva muzana ramakore rechi XNUMX. Iri pachikomo uye ine yakanaka panoramic yekuona yeUdaipur, iyo Aravali gomo renzvimbo uye Lake Pichola. Iyo zvakare ine inonakidza musanganiswa waMughal uye Rajasthani masitayera.
Imba yamambo ine zvemukati zvakanakisa, iine magirazi mazhinji, murusvingo, mamora, sirivheri, uye dziva risingaperi rinotenderera makamuri. Iyo inozivikanwa nzvimbo yekushanya uye nzira huru yekuwana humambo hwoumbozha, mune ino nyaya kubva kuMewar imba.
Iyo City Palace yakavhurwa mazuva ese evhiki, kubva 9:30 am kusvika 5:30 pm.
Muzinda uyu waimbove waMaharaja weGwalior. Zvinobva XIX remakore uye ndizvo chaizvo Maitiro eEuropean. Iyo ine matatu pasi uye zvakare inosanganisa ekuvaka masitaera. Paburiro rekutanga manyorerwo anoyeuchidza Tuscany, yechipiri iri yakawanda Itari, ine Doric mbiru, uye yechitatu ine yakawanda yeCorinthia maitiro.
Chinhu chakanakisa nezve muzinda wakanaka Imba yeDurbar, ine yakawanda yegoridhe, machira uye fluffy maforodha. Nhasi uno miziyamu kwaunogona kuona muunganidzwa wakanaka wezvombo zvekare, zvinyorwa zvezvakaitika uye zvinhu zvezvakaitika kare.
Muzinda uyu unovhura kubva munaKubvumbi kusvika Nyamavhuvhu kubva 10am kusvika 4:45 pm, uye kubva Gumiguru kusvika Kurume anovhura kubva 10am kusvika 4:30 pm, asi anovhara neChitatu.
Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX uye yaive imba yekugara yepamutemo yeNizams yenzvimbo iyi. Iine zvivanze zviviri, imwe yekumaodzanyemba ine ina ne-classical dhizaini dzimba, uye imwe kuchamhembe ine koridho hombe ine dziva uye tsime.
Khilwat Mubarak Hall inoshamisira uye ndipo pano pakaitika mhemberero dzezvinamato zvepamutemo uye zviitiko. Mazuva ano, vashanyi vanogona kufamba nepakati pezvivanze zvese uye voona horo, iyo inosanganisa Mughal nePersia masitayera, senge chivakwa chose
Chowmahalla Palace, iro zita rinoreva kuti dzimbahwe ina, yakavhurwa mazuva ese kunze kweChishanu uye zororo renyika, kubva 10am kusvika 5 pm.
Jaipur Guta reMuzinda
Iyo ndeimwe yemadzimba anozivikanwa muIndia uye mumwe wevanodiwa zvikuru. Yakavakwa mukati 1732 uye yaive yeMaharaja weJaipur, Sawai Jai Singh II, mambo kwemakore makumi mana nemashanu. Pasati pave nevamwe, asi ndiye aive wekupedzisira.
Muna 1949 humambo hweJaipur hwakabatana neIndia, asi chivakwa chakaramba chiri pekugara chemhuri yehumambo. Imba yamambo yakadii? Inobatanidza masitaera ekuvaka, iyo yeEuropean, iyo Rajput, iyo Mughal. Ine magadheni akawanda, matende uye tembere.
Muzinda uyu unozivikanwa neayo makata akagadzirwa kunge mapikoko. Kuona kunotenderwa kubva Muvhuro kusvika Svondo kubva 9 am kusvika 5 pm.
Muzinda uyu unoshamisa uye uri pane yakakura kwazvo. Inonzi ndiyo zvakare nzvimbo huru yekugara yega kubva ipapo iyo yakapetwa kana kukura saBuckingham Palace.
Yaive yekugara yepamutemo yemhuri yehumambo yeVadodara uye vagari venhaka yavo vachiri kugara pano. Iyo chivakwa chemuzinda Iyo ine zvivakwa zvinoverengeka, dzimbahwe, miziyamu uye zvese zvine fenicha, zvinhu zvehunyanzvi uye pendi kubva kumativi ese epasi.
Iyo yemukati inoshamisa asi ndizvo zvakaitawo kunze, iine manicured, ayo akapetwa magadheni uye a gorofu Makomba gumi. Neraki, imba yamambo yakavhurika vashanyi, zuva rega rega kunze kwemazororo neMuvhuro, kubva 10:9 am kusvika 30 pm.
Lake Palace kana Jag Niwas
Iri paLake Pichola uye Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX. Yaive yemhuri yehumambo yeMewar uye nhasi inoshanda se hotera yepamusoro ine machena machena akawanda. Iine makamuri makumi masere nemasere nemasites uye vanoti ndiyo imwe yemahotera anodakadza aripo.
Sezvo iri kumucheto kwedziva iyo kukwira chikepe ndiwo marongero ezuva. Chokwadi: muna 1983 yaive nzvimbo yeiyo James Bond firimu Octopussy. Yavo vaenzi vakakurumbira vaive Mambokadzi Elizabeth, Vivien Leigh kana Jacqueline Kennedy.
Muzinda uyu wakashandurwawo kuitwa hotera yepamusoro. Icho chiri cheketani yehotera Taj Hotels, kubvira 2010, uye yakanaka kwazvo. Yakavakwa pachikomo chingangoita 610 metres kukwirira uye nekudaro ane akanaka maonero ePearl Guta rinozivikanwa.
Iyo yemukati ine maVenetian chandeliers, mbiru dzeRoma, nhanho dzemabhura, zvifananidzo kwese kwese, uye fenicha yemhando yepamusoro. Iyo zvakare ine chiJapanese-dhizaini, Rajasthani-dhizaini uye Mughal-maitiro magadheni.
Iyi imba yamambo yaimbova imba yeumambo yakachengetedzwa yeMaharaja yeJaipur. Kubva 1857 ihotera zvakare kubva kuTaj Hotel boka. Makamuri ayo akashandurwa kuita masuti uye nhasi vashanyi vanofamba nemumapaseji emarble akanaka uye mapindu akanaka.
Izvi ndizvo zvimwe zve dzimba dzoushe dzakanakisisa muIndia. Kune mamwe akawanda, sezvo hupfumi hwemadzishe emuno hwaive hwakakura. Neraki ivo vapona kusvika nhasi uye neimwe nzira kana imwe, kungava sevashanyi kana sevane rombo rakanaka vaenzi, tinogona kuvashanyira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Dzakakosha dzimba dzehumambo muIndia
Mamiriro ekunze eColombia